एयरपोर्टको विकृति हामी कहिले सुध्रन्छौं ? - khabarchakra.com ~ News from nepal
बिचार बिमर्श समाचार
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार २१:५० 12/03/2020 Khabar Chakra
अन्जु क्षेत्री / देश विकास भएन भन्ने देखि साना साना कुरामा पनि सरकारलाई गाली गर्ने संस्कार नै सर्बव्यापी भईरहँदा हामी आफू कस्तो अवस्थामा छौं भन्ने चैं कसैले हेर्दा रैनछौं । हाम्रा साना कामले पनि सकारात्मक कामको सुरुवात गराउन सक्नेतिर पनि ध्यान दिन सक्थ्यो होला भन्ने चेत कतिमा आउँछ होला ? आफू मात्रै राम्रो काम गर्ने हो, सुध्रने हो भने त देश, समाज र संसार नै राम्रो हुन सकिहाल्छ नि । गएको शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल र प्रतिक्षालयमा देखिएका केही दृश्य र यात्रुका आफन्तको व्यवहारले आफैंलाई गिज्याएकाले केही लेख्न बाध्य पार्यो ।
लामो समय सरसफाई देखि सामाजिक सुधारको अभियानमा लागेको अभियन्ताका हिसावले कमसेकम आफू राम्रो काम गरौं, अरुका लागि भन्दा पनि आफ्नो मन शान्तिका लागि भए पनि असल बाटोमै लागौं भन्ने चाहनाका कारण कतिपय गलत प्रबृति विरुद्ध बोल्न साहस जुटेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा जब जापानबाट आउँदै गरेको बहिनीको पर्खाइमा उभिँदै थिएँ । त्यहाको अवस्था हेर्दै लज्जाजनक थियो । एयरपोर्ट व्यवस्थापनले व्यवस्थित गरेको यात्रु प्रतिक्षालयका कुर्सीहरुमा लक्का जवान युवा युवतीहरु हेर्दै सभ्य र पढेलेखेका देखिनेहरुका व्यवहार बडो लाजमर्दो थियो ।
बेन्चमाथि उभिएका युवाहरुलाई तपाईहरुको संस्कारबाट विदेशीले के बुझ्लान ? के छाप पर्ला नेपालीहरुप्रति कृपया तल झर्नुहोस् भन्दा उनीहरुले उल्टै वाइडबडी र अरु भ्रष्टाचारका कुरा उठाउनु नि किन हामीलाई मोवाइल देखाएको भन्दै हप्काए । तर एउटा अभियन्ताको नाताले मैले उनीहरुको फोटो खिच्ने प्रयास गरें । तपाईहरुलाई टेक्न वा उभिनका लागि कुर्सी राखिएको होइन भनेर ओरालें । प्लेन ल्याण्ड भईसकेको जानकारी पाएकाहरु आफन्त आउने पाँच दश मिनेट कुर्न नसकेर देखाएको असभ्य संस्कारको लागि आत्मानुभूती गराउने प्रयास गरियो ।
केही युवाहरुले भने मोवाइल झिकेर धमाधम फोटो खिच्न थालेपछि झरेर सरी भन्दै आफैं कुर्सी पुछ्नेसम्मका काम गरे भने धेरैले त उल्टै गाली गरे । हाम्रा साना बानीहरुले पनि ठूला परिवर्तनका लागि इट्टा थप्न सक्छौं । सोंच बदल्यौं भने परिवर्तन ल्याउन सक्छौं । तर नसुध्रने हो भने कहिले बदलिन्छ देश ? कहिले बदलिन्छ समाज ?
← घुस लिँदालिँदै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका २ कर्मचारी पक्राउ
प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा हुँदा सुस्तायो राजनीतिक गतिविधि →
इमाडोल–लामाटार सडक विस्तारको काम तीन वर्षमा ६० प्रतिशत मात्रै
१० पुष २०७६, बिहीबार १४:४३ Khabar Chakra 0
२ पुष २०७६, बुधबार ११:२५ Khabar Chakra 0
कोमविसापले सरकारलाई बुझायो ‘पोलिसी मेमो’
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०८:२२ Khabar Chakra 0